“စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဒေါသ” က ၀ိတ်တက်စေနိုင်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိ - CeleLove
“စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဒေါသ” က ၀ိတ်တက်စေနိုင်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိ
July 10, 2019 Cele Love ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ, ဗဟုသုတများ 0
ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဒေါသက ရောထွေး ဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒေါသကြောင့် ၀ိတ်တတ်စေနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီး မူကြောင့် ၀ိတ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ရင် ကြွက်သားတွေအားနည်းလာပြီး စိတ်ဖိစီးတာကြောင့် ၀မ်းဗို က်နေရာမှာ အဆီစုလာစေပါတယ်။ ဒေါသနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် သကြား ၊ အဆီ နဲ့ ဆား တို့ စားချင်စိတ်ပိုမြင့်လာေ စပါတယ်။ ခြေထောက်နဲ့ လက်မောင်းကြွက်သားအားနည်းနေပေမယ့် ဗိုက်မှာတော့ အဆီတွေဖြစ်လာပြီး မေးနှစ်ထ ပ်ဖြစ်လာေ စပါတယ် … ။
အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ၀မ်းဗိုက်မှာအဆီပိုတွေစုလာတယ် ၊ အသားအရေပြောင်းလာတယ် (အထူး သဖြင့် ၀က်ခြံပေါက်လာတယ် ၊ မျက်နှာအသားအရေကြမ်းလာတယ်) ၊ ခါးနဲ့ ကျောမှာပါ အဆီတွေစုလာပါ တယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင်ဖြစ်တဲ့ အ၀လွန်တာတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ ၀ိတ်ချပစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ဟော်မုန်းေ တွက ၀ိတ်ကျဖို့ရာ ကိုဆန့်ကျင့်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ၀ိတ်တတ်လာတာတွေကို ကျွမ်းကျင်အ ဆင့်ရှိတဲ့ ကုသမှုမျိုးနဲ့မှ အကူအညီဖြစ်မှာပါ။ (ဥပမာ – ဆေးဖက်ဝင်အပင်တို့ဖြင့်ဖော်စပ်ထားသောဆေး ၊ စိတ်ဖိစီး မှုကိုထိန်းချုပ်နည်း ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း) တို့ဖြစ်ပါ တယ် ….. ။
နေ့တိုင်း ရေ (၂) လီတာ သောက်ခြင်းဖြင့် ၀ိတ်ကျသွားအောင် လုပ်နည်း –
(၁) မနက်အိပ်ရာနိုးပြီးပြီးချင်း ရေ (၂)ခွက် သောက်ပေးပါ … ။
(၂) ညစာကို ဆားမသုံးဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားပေးပါ။ green tea သောက်ပေးပါ ၊ ရေများများသောက်ပေးရပါမယ် …. ။
(၃) ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်ကိုပဲ ရွေးချယ်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ် …. ။
“စိတျဖိစီးမှုနဲ့ ဒေါသ” က ၀ိတျတကျစနေိုငျဟု လလေ့ာတှရှေိ့
ကိုယျအလေေးခြိနျဟာ စိတျဖိစီးမှုနဲ့ ဒေါသက ရောထှေး ဆကျစပျနတေတျပါတယျ။ ဒေါသကွောငျ့ ၀ိတျတတျစနေိုငျပွီး စိတျဖိစီး မူကွောငျ့ ၀ိတျကစြနေိုငျပါတယျ။ ဒေါသဖွဈရငျ ကွှကျသားတှအေားနညျးလာပွီး စိတျဖိစီးတာကွောငျ့ ဝမျးဗို ကျနရောမှာ အဆီစုလာစပေါတယျ။ ဒေါသနဲ့ စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ သကွား ၊ အဆီ နဲ့ ဆား တို့ စားခငျြစိတျပိုမွငျ့လာေ စပါတယျ။ ခွထေောကျနဲ့ လကျမောငျးကွှကျသားအားနညျးနပေမေယျ့ ဗိုကျမှာတော့ အဆီတှဖွေဈလာပွီး မေးနှဈထ ပျဖွဈလာေ စပါတယျ … ။
အမြိုးသမီးတှမှောဆိုရငျ စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ဝမျးဗိုကျမှာအဆီပိုတှစေုလာတယျ ၊ အသားအရပွေောငျးလာတယျ (အထူး သဖွငျ့ ဝကျခွံပေါကျလာတယျ ၊ မကျြနှာအသားအရကွေမျးလာတယျ) ၊ ခါးနဲ့ ကြောမှာပါ အဆီတှစေုလာပါ တယျ။ စိတျဖိစီးမှုကွောငျဖွဈတဲ့ အဝလှနျတာတှကေို လှယျလှယျနဲ့ ၀ိတျခပြဈဖို့မလှယျပါဘူး။ အကွောငျးကတော့ ဟျောမုနျးေ တှက ၀ိတျကဖြို့ရာ ကိုဆနျ့ကငျြ့နတောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ၀ိတျတတျလာတာတှကေို ကြှမျးကငျြအ ဆငျ့ရှိတဲ့ ကုသမှုမြိုးနဲ့မှ အကူအညီဖွဈမှာပါ။ (ဥပမာ – ဆေးဖကျဝငျအပငျတို့ဖွငျ့ဖျောစပျထားသောဆေး ၊ စိတျဖိစီး မှုကိုထိနျးခြုပျနညျး ၊ ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျး) တို့ဖွဈပါ တယျ ….. ။
နတေို့ငျး ရေ (၂) လီတာ သောကျခွငျးဖွငျ့ ၀ိတျကသြှားအောငျ လုပျနညျး –
(၁) မနကျအိပျရာနိုးပွီးပွီးခငျြး ရေ (၂)ခှကျ သောကျပေးပါ … ။
(၂) ညစာကို ဆားမသုံးဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားပေးပါ။ green tea သောကျပေးပါ ၊ ရမြေားမြားသောကျပေးရပါမယျ …. ။
(၃) ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအသောကျကိုပဲ ရှေးခယျြစားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ …. ။
Victoria အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန် စွပ်စွဲချက်များ၊ ဆူပူ ဆန္ဒပြစေရန် လှုံ့ဆော်မှုအရေးအသားများ ပြုလုပ်ပါက အရေးယူသွားမည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကြေညာ…